Doh Pyay Doh Myay / Our Land Our Region – Page 2
Doh Pyay Doh Myay / Our Land Our Region Blog
by DPDMadmin · Published October 24, 2017
PYAY DPDM5 # 15
Welcome to the 15th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Pyay (Bago Region). ပြည် “ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးက မြို့ကလေး။ ကဗျာဆရာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်းတွေမွေးထုတ်ပေးခဲ့သလို စစ်အာဏာရှင်ကိုလဲမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်က ပျူလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ သရေခတ္တရာမြို့...
by DPDMadmin · Published October 18, 2017
HSIHSENG DPDM5 # 14
Welcome to the 14th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Hsihseng (Shan State). ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ တောင်ဖက်အစွန်ဆုံးမြို့ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ ဆီဆိုင်မြို့ ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိရမ်းငွှေ့တွေမိုးခဲ့တဲ့ဒေသ၊ လွိုက်ကော်မြို့နဲ့ ၃၈ မိုင်ပဲဝေးကွာတဲ့မြို့ ၊...
LANGKHO DPDM5 # 13
Welcome to the 13th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Langkho (Southern Shan State). ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးဒေသဖြစ်သလို ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေပေါင်း ၉၉၆ ပေသာမြင့်တဲ့ဒေသ ရှမ်းအညာလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ရအောင် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အပူဆုံးဒေသ။ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့...
by DPDMadmin · Published October 2, 2017 · Last modified October 18, 2017
DVB Special week DPDM5 # 12
Welcome to the 12th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to DVB 25 Anniversary (Special Week). ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်တာအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာထောင်ကျခံရမှာတွေ နှိပ်ဆက်ခံရမှုတွေမကြောက်ပဲဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်း မြန်မာ့ရေးရာအဖြာဖြာတွေကို စွန့်လွှတ်စွန့်စားသတင်းရယူပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ...
by DPDMadmin · Published September 25, 2017
KYAUKTAN DPDM5 # 11
Welcome to the 11th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Kyauktan (Yangon Region). လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ကျော်က မွန်လူမျိုးတွေစပြီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပါဒနိုင်ငံ တော်ပျူခေတ် အင်းဝခေတ် တို့လိုသမိုင်းစာမျက်နှာမှာထည့်သွင်းခြင်းမခံရတဲ့ ပါဒဘုရင်တွေ နန်းဆက် ၃၄...
by DPDMadmin · Published September 18, 2017
SALAY DPDM5 # 10
Welcome to the 10th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Salay (Magway Region). ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့၊ သမိုင်းထဲမှာပဲကျန်နေခဲ့တဲ့မြို့ ဒုတိယပုဂံလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့မြို့ ၊ ရွာကြီးကနေမြို့ကြီးဖြစ်၊ မြို့ကြီးကနေရွာကြီးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့မြို့ ပုဂံခေတ် ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းပိုင်းနဲ့ကိုလိုနီခေတ်ဦးပိုင်း ဗိသုကာလက်ရာတွေကို တစ်နေရာထဲမှာတွေမြင်ရတဲ့ဒေသ...
by DPDMadmin · Published September 11, 2017 · Last modified September 18, 2017
MYINGYAN DPDM5 # 9
Welcome to the 9th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Myingyan (Magway Region) . ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒေသ မြန်မာနိုင်ငံအလည်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မိုးနည်းဒေသ ရိုးရာဆေးပေါ့လိပ်နဲ့ ဆီထွက်တဲ့ဒေသမြင်းခြံမြို့၊ အရင်ကမြင်းခြံ အခုမြင်းခြံဘာတွေပြောင်းလဲနေပြီလဲ ဒေသခံတွေဘယ်လိုရပ်တည်နေထိုင်ကြလဲ သူတို့ဘာတွေမျှော်လင့်နေကြသလဲဆိုတာတွေကို...
by DPDMadmin · Published September 4, 2017 · Last modified September 18, 2017
KYAIKMARAW DPDM5 # 8
Welcome to the 8th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Kyaikmaraw (Mon State) . ဒီတစ်ပတ်တို့ပြည်တို့မြေအစီအစဉ်မှာတော့ ရာမညတိုင်းလုို့ခေါ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူနေမှုစရိုက်တွေကိုရှု့စားရမှာပါ။ ငယ်စဉ်ကထဲက ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ပြီး ဒုက္ခိတဖြစ်နေပေမယ့် အခုချိန်ထိ ကိုယ်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနေရတဲ့ အသက်...
by DPDMadmin · Published August 29, 2017
THATON DPDM5 # 7
Welcome to the 7th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Thaton(Mon State) . ပီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံက ကျွန်းတွေပေါ်မှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်ဇာတိမြေကို ပြန်လာပြီး စက်လှေမောင်းတယ် ၊ကိုယ့်ဇာတိမြေမှာ အနီးအနားတစ်ဝှိက်က လာရောက်လည်ပတ်ချင်သူတွေအတွက်...